Iziphambeko Ziyoholela Umuntu Esihogweni | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ngininike izexwayiso eziningi futhi ngabeka amaqiniso amaningi phezu kwenu ukuze ngininqobe. Namhlanje nizizwa nicebe kakhulu kunangesikhathi esidlule, niqonda izimiso eziningi ezimayelana nendlela umuntu okufanele abe yiyo, futhi abe nokuhluzeka okuningi engqondweni abantu abathembekile okufanele babe nakho. Yilokhu enikuzuzile manje eminyakeni eminingi. Angiziphiki izinto enizizuzile, kodwa kumele ngisho ngingananazi ukuthi angikuphiki nokungalaleli kwenu okuningi nokuhlubuka kwenu Kimi kule minyaka eminingi, ngoba akukho ngisho noyedwa ongcwele phakathi kwenu, nonke jikelele ningabantu abakhohlakaliswe uSathane, nezitha zikaKristu. Iziphambeko nokungalaleli kwenu kuze kube manje akunakubalwa, ngakho akumangalisi nakancane ukuthi njalo ngiphindaphinde engikushoyo phambi kwenu. Angifuni ukuphila ngale ndlela nani, kodwa ngenxa yekusasa lenu, ngenxa yeziphetho zenu, ngizophinde ngikusho okokugcina engike ngakusho ekuqaleni. Nginethemba lokuthi nizongibekezelela, futhi nginethemba elikhulu lokuthi nizokwazi ukukholwa wonke amazwi engiwashoyo, ngaphezu kwalokho, ukuthi nizoyiqonda incazelo ejulile yamazwi Ami. Ningakungabazi engizokusho, noma okubi nakakhulu, nicaphune amazwi ami ngendlela enifisa ngayo niwalaxaze kude ngokuthanda, engikuthola kungabekezeleleki. Ningawahluleli amazwi Ami, ingasaphathwa eyokuwathatha kancane, noma nithi ngihlale nginilinga, noma okubi nakakhulu, nithi enginitshele khona kuntula ukunemba. Lezi zinto ngizithola zingabekezeleleki. Ngoba niphatha Mina nalokho engikushoyo ngendlela enokusola futhi aniwalandeli amazwi Ami futhi niyangiziba, nginitshela nonke ngamunye ngokungadlali: Engikushoyo ningakuhlanganisi nefilosofi, ningakuhlanganisi namanga abazenzisi, ngaphezu kwalokho, ningawabheki njengangabalulekile amazwi Ami. Mhlawumbe esikhathini esizayo akekho oyokwazi ukunitshela izinto enginitshela zona, noma akhulume nani ngomusa ongaka, ingasaphathwa eyokuhambisana nani kula maphuzu ngesineke. Izinsuku ezizayo zizochithwa ekukhumbuleni izikhathi ezinhle, noma ekukhaleni kakhulu, noma ekububuleni ngenxa yezinhlungu, noma nizophila ebusukwini obumnyama obungenayo nenhlansi yeqiniso noma ukuphila okunikeziwe, noma nimane nilinde ningenathemba, noma ukuzisola kabuhlungu okunjalo ngokuthi nedlule ekucabangeni…. Lezi ezinye zezinto ezingenzeka cishe okungekho namunye phakathi kwenu ongaphunyuka kuzo. Ngoba akekho kini osesihlalweni akhonza uNkulunkulu ngeqiniso kuso; nizicwilisa ezweni eligcwele ukuxegelwa isimilo nobubi, lihlanganise ezinkolweni zenu, emimoyeni yenu, emiphefumulweni, kanye nasemizimbeni izinto eziningi ezingahlobene nokuphila neqiniso futhi empeleni nimelana nazo. Ngakho enginethemba lakho kini ukuthi ningalethwa endleleni yokukhanya. Okuwukuphela kwethemba enginalo ukuthi nikwazi ukuzinakekela, nokuthi anigxili kakhulu esiphethweni senu ngenkathi nibheka ukuziphatha neziphambeko zenu ngokunganaki.
Abantu asebekholwe kuNkulunkulu isikhathi eside, manje sebenethemba lesiphetho esihle, bonke abantu abakholwa kuNkulunkulu bathemba ukuthi bazovelelwa inhlanhla ngokuphazima kweso, bonke bathemba ukuthi bengazelele bayozithola behleli ngokuthula endaweni eyodwa noma kwenye ezulwini. Kodwa ngithi laba bantu kanye nemibono yabo emihle abakaze bazi ukuthi zibafanele yini lezo zinto ezinhle ezivela ezulwini, noma ukuhlala esihlalweni ezulwini. Nina okwamanje nizazi kahle, kodwa nethemba ukuthi ningakwazi ukuphunyuka ezinhlekeleleni zezinsuku zokugcina nasesandleni sikaSomandla esijezisa ababi. Kubonakala sengathi ukuphupha kahle nokufuna izinto zinjengoba bethanda kuyisici esivamile kubo bonke abantu abonakaliswe uSathane, akuwona umbono ohlakaniphile womuntu oyedwa. Noma kunjalo, ngisafuna ukuqeda ngezifiso zenu zokweqisa kanye nokulangazelela kwenu ukuthola izibusiso. Ngenxa yokuthi iziphambeko zenu ziningi kakhulu nokungalaleli kwenu kuningi futhi kuyanda, lokhu kungahlangabezana kanjani nekusasa lenu elihle elilotshiwe? Uma ufuna ukuhamba ngendlela oyithandayo yokuba sephutheni, kungenalutho oludonsela emuva, kodwa usafuna amaphupho afezeke, ngiyakunxusa ukuthi uqhubeke nokozela kwakho futhi ungalokothi uvuke—ngoba iphupho lakho alinalutho, futhi ebukhoneni bukaNkulunkulu olungile ngeke akubuke ngokwehlukile. Uma ufuna nje ukuthi amaphupho afezeke, ungalokothi uphuphe, kodwa hlale ubhekana neqiniso, ubhekane namaqiniso. Leyo ukuphela kwendlela ongasindiswa ngayo. Ngokungagwegwesi yiziphi izinyathelo zale ndlela?
Nginezifiso eziningi. Ngifisa sengathi ningaziphatha ngendlela efanele, nithembeke ekufezeni umsebenzi wenu, nibe neqiniso nobuntu, nibe ngabantu abangadela konke banikele ngokuphila kwabo ngenxa kaNkulunkulu, njalo njalo. Wonke la mathemba asuka ekuntuleni nasekukhohlakaleni kanye nasekungalalelini kwenu. Uma noma iyiphi yezingxoxo engibe nazo nani inganele ukuba niyinake, mhlawumbe okuwukuphela kwento engingayenza ukungasho lutho. Kodwa, niyayiqonda imiphumela yalokho. Angiphumuli, ngakho uma ngingakhulumi, ngizokwenza okuthile abantu abazokubona. Ngingabolisa ulimi lomuntu, noma umuntu afe eyizicucu, noma nginike abantu imizwa engaphilile futhi ngibenze babukeke bebabi ngezindlela eziningi. Futhi-ke, ngingenza abanye abantu babekezelele ukuhlukumezeka engibabekele khona. Ngale ndlela ngiyojabula, ngithokoze kakhulu futhi ngename. Bekuhlale kuthiwa, “Okuhle kubuyiswa ngokuhle, nokubi ngokubi,” pho kungani kungabi njalo manje? Uma ufuna ukumelana Nami futhi ufuna ukungahlulela, ngizobolisa umlomo wakho, futhi lokho kuyongijabulisa ngokungapheli. Lokhu kungenxa yokuthi ekugcineni, lokhu okwenzile akulona iqiniso, ingasaphathwa eyokuphathelana nokuphila, kuyilapho konke engikwenzayo kuyiqiniso, yonke into ibalulekile emiyalweni yomsebenzi Wami nasezinqumweni zokuphatha engizilobile. Ngakho, nginxusa ngamunye kini ukuba aqongelele ukulunga, ayeke ukwenza ububi obungaka, futhi ninake izimfuno zami ngesikhathi senu. Ngakho ngiyojabula. Uma ubuzonikela eqinisweni okukodwa enkulungwaneni kwemizamo oyifaka kokwenyama, khona-ke ngithi ubungeke ube neziphambeko njalo futhi nomlomo obolile. Akukho yini sobala lokhu?
Ukwanda kweziphambeko zakho, kusho ukuncipha kwamathuba okuzuza isiphetho esihle. Ngokuphambene, ngokuncipha kweziphambeko zakho, ayanda amathuba okuba unconywe nguNkulunkulu. Uma iziphambeko zakho zanda kuze kufike ezingeni lokuthi ngingakwazi ukukuxolela, uyobe udlale ngamathuba akho okuxolelwa. Kuleso simo isiphetho sakho ngeke sibe ngaphezulu kodwa siyoba ngaphansi. Uma ungangikholwa, yiba nesibindi wenze okubi, ubone ukuthi uzotholani. Uma ungumuntu oqotho owenza iqiniso, nakanjani uzoba nethuba lokuthi iziphambeko zakho zithethelelwe, liyoncipha inani lokungalaleli kwakho. Uma ungumuntu ongazimisele ukwenza iqiniso, iziphambeko zakho phambi kukaNkulunkulu ziyokwanda nakanjani, izikhawu zokungalaleli kwakho ziyokhula nakakhulu, uze ufike emkhawulweni, okuyoba yisikhathi sokubhujiswa kwakho okuphelele. Lokhu kuyoba yilapho iphupho lakho elimnandi lokuthola izibusiso liyobhidlika khona. Ungabheki iziphambeko zakho njengamaphutha omuntu ongavuthiwe noma oyisiphukuphuku, ungasebenzisi izaba zokuthi awulenzanga iqiniso ngoba izinga lakho eliphansi lenze kwaba nzima ukuthi ulenze, futhi ngaphezu kwalokho, ungamane ubheke iziphambeko ozenzile njengezomuntu obengazi lutho olungcono. Uma umuhle ekuzithetheleleni nasekuziphatheni ngomusa, khona-ke ngithi kuwe uyigwala elingasoze lazuza iqiniso, futhi iziphambeko zakho azisoze zayeka ukukulandela, kodwa ziyokwenza ungahlangabezani nokufunwa iqiniso futhi zikwenze uhlale ungumngani othembekile kaSathane. Ngisakweluleka ngokuthi: Unganaki isiphetho sakho kuphela bese ungazinaki iziphambeko zakho ezicashile; ungazithathi kancane iziphambeko zakho, futhi ungazibukeli phansi iziphambeko zakho ngenxa yokukhathazeka ngesiphetho sakho.
Okwedlule: Izexwayiso Ezintathu
Okulandelayo: Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu